Sokajiana ho “fototra” ny vatoaratra ampiasaina indray mandeha monja ary tsy azo fahanana, ary atao hoe “fanampiny” kosa ireo izay azo fahanana. Na dia ankalazaina fatratra aza ny lafitsaran’ny bateria “fanampiny” indrindra eo amin’ny tontolo manodidina, ary mahazo vahana eo amin’ny tsena ny fampiasana bateria “fanampiny”, dia diso ihany ny fiheverana fa efa lany andro ny vatoaratra “fototra” satria misy fampiasana izay mifanaraka kokoa amin’ny vatoaratra “fototra” irery ihany. Tsy lafo sy azo ampiasaina avy hatrany ary mora hita rahateo ny vatoaratra fototra, ary indrindra tsy miankina amin’ny aratra ivelany.
Raha mihena ny fampiasana vatoaratra hafa, ny vatoaratra alkaline sy litiôma ary fanitso-ôksizena kosa no tena fampiasa. Ny vatoaratra litiôma ampiasaina amin’ny fitaovana manampmy ny fo (pacemakers) ohatra dia mateza 5 – 10 taona, ny fanitso-ôksizena manampy amin’ny fihainoana dia amam-bolana vao mila soloina.
Mbola manana ny toerany tanteraka araka izany ny vatoaraka “fototra” raha tsy hijery afa-tsy ohatra vitsivitsy toy ny famataranandro, fitaovana apetraka amin’ny biby na vorona (bird trackers), fanalahidy mandeha amin’ny herinaratra, kilalao, sns.
Tranainy indrindra amin’ny vatoaratra simika ary nampiasaina nanomboka ny faran’ny taonjato faha-18 ny vatoaratra fanitso-karbôna. Mamoaka aratra 1.5V ka hatramin’ny 510V, ary nomena bika sy habe samihafa arakaraka ny filàna. Akora mora hita sy mora vidy no nanamboarana azy ka ekônômika na ho an’ny mpamboatra na ho an’ny mpanjifa. Noraràna ny fampiasana volavelona amin’ity vatoaratra ity tamin’ny fiandohan’ny taona 90.
Toetra manokan’ny vatoaratra Fanitso-Karbôna ilay tsiranoka mitete avy ao anatiny rehefa afaka fotoana elaela. Ny antony dia kikisan’ilay elektrôlita (klôridana amôniôma) fonosiny ilay fanitso ka mihamanify ary farany loaka sy mamoaka ilay tsorana elektrôlita.
Ny vatoaratra fanitso-klôrida dia mitovitovy firafitra amin’ny fanitso-karbôna ihany saingy mampiasa elektrôlita klôridana fanitso ary voalaza fa matanjaka kokoa
Kely tahiry fahana ary malaky fandaniam-pahana ny vatoaratra Fanitso-Karbôna ka azo refesina amin’ny ora vitsivitsy. Misy ihany karazany mampiasa klôridana fanitso ary manana fitahiry misimisy kokoa (super heavy duty) sy miadana fandaniam-pahana miohatra amin’ilay tsotra.
Fandaniam-pahana eo amin'ny vatoaratra Panasonic R6 (sary: www.panasonic.com/batteries)
Tsy azo tehirizina maharitra ity karazana vatoaratra ity noho ilay elektrôlita mikiky ny fonony. Fampiasa amin’ny fitaovana tsy mihinana herin’aratra be loatra sy tsy maharitra toy ny jiro fanao am-paosy, kilalao, milina fikajy, famataranandro amin’ny rindrina, hareza, fitaovana enti-mandrefy… ary ny radio transistor. Ny tany mandroso dia tsy ahitana firy ity karazana vatoaratra ity intsony fa efa voasolon’ny karazana vatoaratra matanjaka kokoa sy taka-bidy toy ny alkalina.
Lazaina fa Alkalina ilay vatoaratra satria mampiasa elektrôlita alkalina izay hidrôksidana pôtasiôma mazàna. Ny karazany fahita matetika dia mampiasa lahinaratra vita amin’ny fanitso-diôksidana manganezy, kanefa misy koa mampiasa litiôma-diôksidana manganezy (antsoina mazàna ho vatoaratra fototra litiôma) izay matanjaka kokoa noho ny fanitso-diôksidana manganezy ary lafo ihany koa.
Tsara noho ny vatoaratra fanitso-karbôna ny alkalina amin’ny lafiny maro satria ambony tahiry fahana, azo tehirizina maharitra, ary tsy mitete.
Ny vatoaratra mampiasa fanitso-diôksidana manganezy no lasa antsoina hoe vatoaratra alkalina eo amin’ny tsena sy ny fanjifana, kanefa maro ny karazana vatoaratra, fototra sy fanampiny, mampiasa elektrôlita alkalina.
Avo tahiry fahana sy miadana fandaniam-pahana noho ny fanitso-karbôna ny alkalina. Ny vatoaratra mampiasa litiôma-diôksidana manganezy dia mbola miadana fandaniam-pahana noho ny mampiasa fanitso-diôksidana manganezy
Fandaniam-pahana eo amin'ny vatoaratra Energizer E91 (sary: www.energizer.com)
Azo tehirizina an-taonany maro amin’ny mari-pàna -40° C ka hatramin’ny 50° C ny vatoaratra alkalina, saingy mateza kokoa amin’ny hatsiaka noho ny amin’ny mafana. Mahasolo tanteraka ny fampiasana vatoaratra fanitso-karbôna ny alkalina, ary fampiasa ihany koa amin’ny fitaovana mila herin’aratra antoniny toy ny fakantsary, kilalao video, mpamaky MP3, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra tsy dia mavesatra loatra any an-tokantrano.
Efa midina ny vidin’ny vatoaratra azo fahanana na bateria, ary tsara koa ny tanjany ka manomboka mihena ny fampiasana alkalina.
Fanitso- ôksizena (Zinc Air)
Avo tahiry fahana ary miadana fandaniam-pahana ny vatoaratra fanitso-ôksizena, ary mora hita sy mora ahodina ihany koa ny mpiorina ao anatiny, toy ny ôksizena sy ny fanitso.
Mampiavaka ity vatoaratra ity ny fisian’ny lavaka kely eo amin’ny vatany, izay natao idiran’ny rivotra ka ahafahana mamokatra aratra avy amin’ny fiotan'ny fanitso sy ny ôksizena avy amin’ny rivotra. Manampina ireo lavaka ireo no anton’ilay plastika mipetaka eo amin’ny ilay vatoaratra vaovao ary tsy tokony esorina raha tsy efa ampiasaina. Rehefa esorina kosa dia avela “maka rivotra” 30 segondra aloha vao apetraka amin’izay ampiasaina azy.
Raha rianaratra 1.4V no tondroiny mbola tsy miasa, dia marin-tombina eo amin'my 1.1V - 1.25V eo kosa izany rehefa ampiasaina mandram-pahatogan'ny tokonana faharitràna.
Miadana fandaniam-pahana ny vatoaratra Fanitso-ôksizena ary eo anelanelan’ny 1.25V sy 1.1V eo ny rianaratra omeny mandritra ny fotoana fandaniam-pahana. Milatsaka tampoka any amin’ny 0V kosa anefa izany rehefa tonga amin'ny tokonana faharitràna.
Fandaniam-pahana eo amin'ny vatoaratra Duracell Zinc Air, 290mAh (sary www.duracell.com)
Azo tehirizina hatramin’ny 3 na 4 taona ny vatoaratra fanitso-ôksizena raha mitampina tsara ilay lavaka fidiran’ny rivotra ary ao amin’ny hafanana antoniny satria sarotiny amin’ny mari-pàna ity karazana vatoaratra ity. Maharitra ela noho izany kosa ny vatoaratra ho an’ny indostria.
Maro ny fampiasana ity vatoaratra ity araka ny habeny: ilay madinika toy ny bokotra ampiasaina amin’ny fitaovana manampy amin’ny fihainoana na solosofina(*) sy fitaovam-pitsaboana, ny salany fanao amin’ny fakan-tsary, ary ny makadiry fampiasa amin’ny fiara mandeha amin’ny herinaratra.
Sokajiana ho isan’ny vatoaratra fototra tsy azo fahanana ny fanitso-ôksizena kanefa efa misy na dia mbola vitsy aza ny karazany azo fahanana.
(*) raha ekena fa solomaso no iantsoana ny fitaovana manampy amin'ny fijerena rehefa misy fahasimbana ny maso, ary solonify izay fitaovana manolo ny nify simba, dia inoana fa azo antsoina ho solosofina izay fitaovana manampy amin'ny fihainoana.
Hita eto ambany ny fampitahana ny fandaniam-pahana amin'ny fampiasana mitovy ny karazana vatoaratra fototra fampiasa. Ny litiôma araka ny sary dia maharitra avo efatra heny noho ny fanitso ary saika avo roa heny noho ny alkalina.
Fandaniam-pahana eo amin'ny vatoaratra fototra vita amin'ny fanitso, alkalina, ary litiôma (sary: www.batteryshowdown.com)
Esory haingana amin'ny fitaovana mampiasa azy ny vatoaratra lany ary ario araka izay toro-lalana misy. Fadio ny manimpy azy anaty afo;
Esory amin'ny fitaovana mampiasa azy ihany koa ny vatoaratra rehefa tsy ampiasaina fotoana ela;
Tehirizo amin'ny toerana maina, azon'ny rivotra ary amin'ny hafanana antoniny ny vatoatra;
Aza fahanana ny vatoaratra fototra raha tsy voamarika fa azo fahanana. Fidio koa izay mpamahana mety raha azo fahanana;
Aza afangaro ny vatoaratra tonta sy vao, samihafa marika sy samihafa karazana rehefa ampiasaina;
Mila fitandremana ny fampiasana vatoaratra manana bika sy habe bokotra amin'ny kilalao sao voatelin'ny zaza;
Pejy teo aloha: Vatoaratra sy Bateria << | >> Pejy manaraka: Bateria NiCd